Vaka Kambani Kiredhiti Iwe Pachezvako - Paradzanisa Bhizinesi kubva kuPeraonal
Kuvaka kambani kiredhiti chiito chekumisikidza chechokwadi uye chakaparadzaniswa bhizinesi kiredhiti. Izvi zvinoreva kuve nebhizinesi rechokwadi uye rakazvimiririra. Nekuumba mubatanidzwa kana LLC, unogona kupihwa EIN (Federal Employer Chitupa Nhamba) kana Mutero ID kubva ku IRS. Izvi ndizvo chaizvo, huwandu hwekuchengetedzeka munharaunda yebhizinesi rako. Iyo inoita kuti iwe ugone kuvhura account yekubhangi, ndiyo nzira iyo IRS inozoziva yako bhizinesi uye ichave iyo tsinde yeyako wakasiyana chikwereti chimiro.
New Bhizinesi Bhizinesi - Unogona kutanga kuumbwa kwebhizinesi nyowani bhizinesi paunenge uchiita izvi. Chero bedzi iwe wapedza nhanho pane peji rapfuura Kuvaka Kambani Kiredhiti Iwe Pachezvako - Bhizinesi Zita uye iwe unoziva kuti rako bhizinesi zita rakagadzirira kuvaka chikwereti na. Maitiro ekubatanidza anotora mavhiki mashoma (zvinoenderana nedunhu rako uye nguva yavo yekufaira) uye mari inotangira pa $ 149.00 chete pamwe nemitero yenyika yako.
Bhizinesi Rezvemabhizimusi Iripo - Makambani Akaunganidzwa ane muunganidzwa we Vakwegura Masangano uye Makambani izvo zvinowanikwa ipapo ipapo. Aya ndiwo mabhizinesi emabhizimisi akatoumbwa, kana kuiswa. Izvi zvinokupa iwe zvishoma zvekutanga musoro. Kune vakweretesi vane nzira dzinosanganisira kuti kwenguva yakareba sei mubatanidzwa. Uchishandisa kambani yakura, iwe unovhura magonhi kana uchinyorera chikwereti. Zvinodiwa maitiro zvakaenzana nesarudzo dzakanaka nemitengo.
Chero nzira, iwe unofanirwa kuve uine rechokwadi bhizinesi chimiro kuti umise bhizinesi kiredhiti. Sole Proprietors anogona kuitisa bhizinesi, zvisinei ivo harisi bhizinesi rakaparadzaniswa nemuridzi. Izvi zvinoreva kuti chikwereti chakapihwa Sole Proprietor hachina kusiyana nechikwereti chega, chichava chimiro chemuridzi.
Yako Yenzvimbo Nzvimbo uye Kero
Unofanirwa kunge uine kero yepamutemo yebhizinesi isiri BHUKU reposvo, rinofanirwa kunge riri nzvimbo chaiyo. Unogona kushandisa kero yako yekumba, zvisinei iwe unozotadza kurasikirwa nemukana wekutora chikwereti kubva kune vanopa mari vasingabhadhare mabhizimusi epamba. Kushandisa tsamba yebhokisi yekutengesa inokwana, zvisinei iwo mhando dzemakero dzinoongororwa nevakweretesi vanoda nzvimbo chaiyo yebhizinesi kuti vawane mari yakakwana. Imwe sarudzo ndeyekubatana nechirongwa chemuhofisi kana kukweretesa Executive suite; aya marudzi emapurogiramu anokupa iwe izere hofisi kubatsirwa, nhamba yemahara, kero yekutumira, wekugamuchira, nezvimwe - kwechikamu chemutengo.
Iwe unofanirwa kuve nekero rako rebhizinesi kuitira maitiro. Makambani Anopindirwa anopa zvirongwa zvemuhofisi mumatunhu akati wandei zvinopa zvese zvakanakira kuve neyako bhizinesi nzvimbo, kwechikamu chidiki chemutengo.
Yako Yenhare Nhare
Chikamu chebhizinesi rako 'kuzivikanwa kuve neyakavimbika bhizinesi nhamba yefoni. Chii chinokodzera senhamba yefoni yebhizinesi? Imwe yakatsaurirwa kukambani yako, inotorwa "Ndatenda nekufonera [zita rekambani] ..." kana neimwe nzira inobatwa zvinehunyanzvi. Voicemail bhokisi kukwazisa kunofanirwa kusanganisira zita rekambani kana zita rebhizimusi rekutengeserana mukurekodha. Kuve uine chaiyo bhizinesi landline kuburikidza neyemuno mupi zvakare inokutendera iwe kuverengerwa mune yavo yemuno 411 dhairekitori rubatsiro. Chikamu chebhizimusi kiredhiti kosi yekuita, vanokweretesa vanoedza kutsvaga bhizinesi rako kuburikidza neruzhinji dhairekitori, senge 411 rubatsiro. Nharembozha neInternet (VOIP) mitsara inogona kushandiswa, zvisinei iwe unoisa njodzi yekusaverengerwa mune 411 director director izvo zvinogona kutungamira kune vamwe vanokweretesa kuongorora bhizinesi rako, uye kana kusakukodzera iwe kuti uwane chikwereti. Nhamba dzeToll Mahara dzenhare dzakanakira kuvimbika uye inodhura kwazvo. Iwe unogona kusarudza kumisikidza iyo 800 Nhamba yebhizinesi rako uye woita kuti inyorwe mune dhairekitori rubatsiro uye kumberi kufona kuInternet kana Cellular based bhizinesi foni.
Pamwe chete nezita rekambani rekambani yako, kero yeemail yebhizinesi inofanira kushandiswa, pane CompanyName @ gmail, Semuyenzaniso. Kambani dura inoenderana neemail inopihwa nevanopa maseru zvemahara, saka izvi hazvifanirwe kufuratirwa.
Kuzivikanwa kweBhizinesi uye Bhizinesi Chikwereti
Sezvauri kuona kubva kune ese matanho aya, chinangwa apa ndechekugadzira rakasiyana bhizinesi chiziviso kubva kwauri. Kana iwe uchimhanyisa bhizinesi, uye kunyange wakabatanidzwa, zvakadaro iwe uine kero yekumba-pamba, nhamba yefoni uye wega email kero, hauna kuparadzaniswa nenzira. Saka nhanho idzi dzinogadzira yakasarudzika kuzivikanwa kwemakambani nechinangwa chekuvaka chikwereti chekambani iwe pachako. Paunonyanya kupatsanura bhizinesi rako kubva kwauri, zvichaita nyore bhizinesi rekuvaka chikwereti kuita uye nemikana mizhinji iwe yauchange uine nevanokweretesa. Chaizvoizvo, izvi zvimiro zvinovhura mikova kune mamwe masangano anokweretesa uye vanopa zvikwereti.
>> Enderera kuNhanho Inotevera Mukuvaka Kiredhiti Kiredhiti - Kukurukura Yako Bhizinesi Kiredhiti Chitupa >>